गर्मी मौसममा अनुहारको स्याहार कसरी गर्ने ? यस्तो छ तरिका – Hotpati Media
गर्मी मौसममा अनुहारको स्याहार कसरी गर्ने ? यस्तो छ तरिका
१० चैत्र २०७५, आईतवार ०८:५१ मा प्रकाशित (2 बर्ष अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ३ मिनेट
ब्युटी टिप्स रश्मिलाज फेसियल हाउस एण्ड व्यूटि केयर, काठमाण्डौ मल काठमाडौँ : विशेषगरी गर्मीको मौसम पसिनाले गर्दा तपाईले जति मेकअप गरे पनि त्यसको खासै उपयोगिता हुदैन । त्यसैलाई मध्यनजर गरी मेकअप गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि म्याट प्रयोग गर्नुपर्छ । सामान्यत आइलाइनर, गाजल, सनक्रिम, फाउन्डेसन तथा लिपिस्टिक प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसैले यतिबेला तल उल्लेख गरिएका कुरामा मात्र विशेष ध्यान पुर्‍याउन सके तपाईको सौन्दर्यमा निखार आउछ ।
यस मौसममा भएसम्म सन्सक्रिम तथा फाउन्डेसनको प्रयोग राम्रो मानिन्छ । त्यस्तै नचम्किने तथा नलत्पतिने खालको मेकअप गर्ने । यसले मेकअपलाई टिकाइराख्नुका साथै लत्पतिन दिदैन । त्यसैगरी चम्किलो देखिने आइस्याडोको प्रयोग गर्नाले अनुहार घाममा टल्कने गर्छ । जसले अनुहारलाई भद्दा देखाउछ । सकेसम्म लिपिस्टिक पनि नबग्ने खालको तथा गाढा कलरको प्रयोग नगरेकै राम्रो हुन्छ ।
यसबेला पानी पर्ने सिजन भएकोले ‘वाटरप्रुफ’ आइलाइनर तथा मस्काराको प्रयोग उचित हुन्छ । आइलाइनरको प्रयोग गर्दा भएसम्म पातलो लाइनर लगाउने । सकेसम्म गाजलको प्रयोग गर्ने । पसिना तथा पानीका कारण यतिबेला गाजल बग्ने तथा पुछिने डर हुन्छ ।
गर्मीमा छाला रुखो देखिन्छ, त्यसैले नियमित क्लिन्जिङ गर्नुपर्छ । डन्डिफोर छ भने बेस प्रयोग गर्नुपर्छ । नियमित योगा गर्नु पनि राम्रो हुन्छ साथै एसपीएफ प्रयोग गर्न बिर्सनु हुँदैन । सौन्दर्य सामग्री तेलरहित हुनुपर्छ ।
यसका साथै पानी प्रशस्त पिउनुपर्छ । रसयुक्त खानेकुरा अर्थात् तरबुजा, आँप, उखुजस्ता रसिला फलफूलमा जोड दिनुपर्छ ।